Thailand dia hahazo vaksin COVID 63 tapitrisa avy any Shina | Vaovao momba ny fahasalamana
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fahasalamana » Thailandy handray vaksin COVID mitentina 63 tapitrisa avy any Shina
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Olona manao vaovao • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News
Thailandy handray vaksin COVID mitentina 63 tapitrisa avy any Shina
Janoary 10, 2021
Thailand dia namoaka drafitra hanaovana vaksiny ny olom-pireneny rehetra manohitra ny COVID-19
Ho fanampin'izay mpiasa tsy ara-dalàna avy any Kambodza, Laos, ary Myanmar dia avela hijanona sy hiasa ara-dalàna mandritra ny roa taona.
Thailand dia nanafatra vaksinin'ny COVID-63 19 tapitrisa dosie avy any ampitan-dranomasina. Ity fivarotana ity dia nankatoavin'ny Kabinetra Thai
Thailand dia nanisa tranga vaovao 745, avo indrindra hatramin'ny nahitana ny areti-mandringana tamin'ny volana janoary lasa teo.
Thailandy izao dia 10,053 no totalin'ny tranga voamarina ary 67 no maty.
1. Ny fandefasana vaksinina vaksiny 200,000 XNUMX voalohany dia kasaina ho tonga any Thailand amin'ny volana febroary avy amin'ny mpamokatra fanafody Sinovac Biotech ao Shina.
Ireo mpitsabo sy olona hafa ao amin'ny faritra fanaraha-maso faran'izay betsaka, toy ireo any Samut Sakhon, Rayong, ary Chon Buri, no vondrona voalohany nahazo ity vaksininy ity.
2. Ho tonga amin'ny volana martsa ny fandefasana vaksinina 800,000 dosia. Amin'ireo fatra ireo, 200,000 no hatolotra ny vondrona voalohany amin'ny tsindrona faharoa, raha 600,000 kosa ny dosie ho an'ny mpitsabo, ireo mpilatsaka an-tsitrapo ho an'ny fahasalamana eny an-tanàna, ary ireo olona hafa ao amin'ny faritra fifehezana ambony indrindra.
3. Ny fandefasana dosie iray tapitrisa dia ho tonga amin'ny volana aprily. Amin'ireo fatra ireo, doka 600,000 no hatolotra ho an'ny vondrona faharoa amin'ny tsindrona faharoa ary fatra 400,000 ho an'ny mpiasa hafa.
4. Thailandy dia hahazo vaksin 26 tapitrisa fanampiny amin'ny tapaky ny taona amin'ity taona ity ho an'ny vondrona isan-karazany amin'ny mponina Thai.
Izy io dia niantoka ireo fatrany ireo tamin'ny alàlan'ny AstraZeneca, izay namolavola ny vaksinina niaraha-niasa tamin'ny Oxford University any UK.
5. Ho fanampin'izay, ny praiminisitra jeneraly Prayut Chan-o-cha dia nanaiky ny fividianana dosie 35 tapitrisa hafa, nahatonga ny totalin'ny kaomandin'ny vaksinin'ny COVID-19 any Thailandy ho 63 tapitrisa dosia.
Ireo fatra rehetra ireo dia tsy maintsy mahafeno ny mason-tsivana napetraky ny Sampandraharaha misahana ny sakafo sy ny zava-mahadomelina any Thailandy sy ireo firenena hafa voakasik'izany.
Ny departemantan'ny fanaraha-maso ny aretina dia nanambara fa ny mponina Thai dia afaka misoratra anarana amin'ny vaksiny Covid-19 fihodinana voalohany amin'ny faran'ity volana ity, saingy tsy mbola nisy daty marina navoaka. Ireo mpiasan'ny fitsaboana amin'ny laharam-pahamehana ary koa ireo izay ao amin'ireo faritany 5 iharan-doza indrindra ary heverina ho "marefo indrindra" no laharam-pahamehana. Ireo faritany 5 atahorana mafy dia ny Chon Buri, Samut Sakhon, Rayong, Chantaburi ary Trat.
Araka ny tatitra nataon'ny AP dia nanao sonia ny fifanarahana fiaraha-miasa i AstraZeneca tamin'ny volana oktobra 2020 mba hamoahana hatramin'ny 200 tapitrisa dosie ny vaksininy ao amin'ny firenena saingy ny dosie 26 tapitrisa ihany no azony natao. Manantena i Thailand fa ireo vaksininy ireo, izay hamokarin'i Siam Bioscience any an-toerana, dia hatolotra amin'ny volana Jona. Ny praiminisitra Prayuth Chan-ocha koa dia nilaza fa ny alatsinainy dia manandrana mahazo fatra 63 tapitrisa i Thailand, ampy handrakofana kely latsaka ny antsasaky ny mponina ao aminy. Ny kabinetra tamin'ny talata dia nankato ny tetibola 1.2 miliara baht ($ 39 tapitrisa) ho an'ireo vaksiny, izay hatolotra maimaimpoana ho an'ireo teratany Thailandey.
Tamin'ny volana novambra tamin'ny taon-dasa dia efa nilaza ny governemanta fa ny vola dia avy amin'ny tetibola vonjy maika 6 miliara baht natokana ho an'ny fividianana vaksinina. Ny teti-bola izay mitentina 2.379 miliara baht dia natokana ho an'ny National Vaccine Institute ho an'ny fampandrosoana vaksininy ary 3.59 miliara baht ho an'ny Departemantan'ny Fanaraha-maso ny aretina ho an'ny fividianana vaksiny sy fitantanana.
Nandritra ny ankamaroan'ny taona 2020, Thailand dia voafehy ny coronavirus. Taorinan'ny fanidiana mafy ny firenena tamin'ny volana aprily sy mey dia nihena ho zero ny isan'ireo aretina vaovao teo an-toerana, ary nijanona tao anatin'ny enim-bolana manaraka izy ireo.
Nihidy ny sisintaniny i Thailand, nanamafy ny quarantine tsy maintsy atao ho an'ny olom-pireneny ary vahiny vitsivitsy navela hitsidika.
Tamin'ny talata, nitatitra tranga vaovao 527 ny firenena, ny ankamaroan'izy ireo dia mpiasa mpifindra monina tsy ara-dalàna mifandraika amin'ny fihanaky ny tsenan'ny hazan-dranomasina any Samut Sakhon any andrefan'ny Bangkok. Andro iray talohan'io, nanisa tranga vaovao 745 i Thailand, avo indrindra hatramin'ny nahitana ny areti-mandringana voalohany teto amin'ny firenena tamin'ny Janoary lasa teo.
Tamin'ny fanambarana navoakan'ny omaly, ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka Thailand dia nilaza fa resy lahatra izy fa ny onja faharoa amin'ny valan'aretina Covid-19 izay nirongatra hatramin'ny volana lasa teo dia mety hihena amin'ny faran'ny volana Janoary 2021.
Ary i Thailand dia nanolotra famotsoran-keloka ho an'ireo mpiasa mpifindra monina tsy ara-dalàna avy any Kambodza, Laos, ary Myanmar ary avela hiasa ao Thailand mandritra ny 2 taona ao anatin'ny tolon'ny governemanta hanara-maso ny fiparitahan'ny Covid-19. Nankatoavin'ny kabinetra ny tolo-kevitry ny Ministeran'ny Asa hanome ny famotsoran-keloka izay mihatra amin'ny zanak'ireo mpifindra monina ihany koa, araka ny voalazan'ny lalàna momba ny fifindra-monina.
Mba hampiharana ny lalàna dia namoaka baiko vaovao ny Departemantam-paritany (DOPA) sy ny Bangkok Metropolitan Administration (BMA) ny minisiteran'ny atitany mba hanomana antontan-taratasy fisoratana anarana sy hamoaka karapanondro ho an'ireo mpifindra monina.
Ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka (MOPH) dia manao fitsirihana fitiliana Covid-19 sy fizaham-pahasalamana ary manome fiantohana ara-pahasalamana ho an'ireo mpifindra monina.
Mba hahazoana ny famotsoran-keloka, ireo mpifindra monina dia tsy maintsy misoratra anarana amin'ny Ministeran'ny Asa ary mandany ny fepetra fitiliana ara-pahasalamana rehetra.